Rastrabani.com | विकासशील मुलुक बन्न योग्य तर तयार छैन नेपाल, के हुन् आधार ? - Rastrabani.com विकासशील मुलुक बन्न योग्य तर तयार छैन नेपाल, के हुन् आधार ? - Rastrabani.com
काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने योग्यता पुगे पनि नेपालले तत्काल स्तरोन्नति नहुने बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिको कार्यालय (युएनओएचआरएलएलएस) मा आफ्नो धारणा राख्दै नेपालले यस्तो बताएको हो ।
आगामी मार्चमा बस्ने युएनओएचआरएलएलएसको बैठकले नेपाल स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नेछ । नेपालले सो अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकमा योग्यता नपुग्ने तथा अर्थतन्त्र पनि जोखिमपूर्ण रहेकाले तत्काल स्तरोन्नति नहुने धारणा राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
नेपालले २०१३ मा तेह्रौँ आवधिक योजनामार्फत २०२२ भित्र विकासशील मुलुक बन्ने तथा २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
२०११ मा भएको अल्पविकसित मुलुकको चौथो विश्व सम्मेलनले २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको संख्या आधाले घटाउने घोषणा गरेको थियो ।
इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन भनिने यही घोषणाअनुरूप नेपालले स्तरोन्नतिको लक्ष्य तय गरेको हो । हरेक ३ वर्षमा कुनै मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नहुने समीक्षा हुन्छ ।
त्यसरी मापदण्ड पुगेको अवस्थामा युएनओएचआरएलएलएसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक०मा पेश गर्छ । इकोसोकले समेत पारित गरेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले स्तरोन्नतिको निर्णय गर्छ ।
१ एलडिसीका रूपमा नेपालले ठूलो मात्रामा अनुदान पाइरहेको छ । स्तरोन्नति भएपछि त्यो गुम्न सक्छ । नेपालले बढी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । र, ऋण पनि सहुलियत दरमा पाइन्न, बढी ब्याज तिर्नुपर्छ ।
२ एलडिसी मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १ सय ३६ किसिमका सहयोग पाउँछन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भयो भने त्यो गुम्नेछ ।
३ एलडिसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्साररहित वा कम भन्सारसहितको बजार पहुँच पाउँछन् । नेपाल स्तरोन्नति भयो भने त्यो गुम्नेछ, जसले नेपालको निर्यात घट्नेछ । नेपालको तयारी कपडा, कार्पेट र अन्य वस्तुको निर्यात प्रभावित हुनसक्छ ।
४ नेपालले व्यापार वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएको छ । त्यो गुम्न सक्छ ।
५ नेपाललाई अहिले संक्रमणबाट मुक्तिका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान तथा सस्तो दरको सहयोग चाहिएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो गुम्न सक्छ । त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जको सामना गर्न नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका लागि विशेष कोषबाट अनुदान पाइरहेको छ । त्यो पनि गुम्न सक्छ ।
६ अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिन पाउँछ । तर, यस्तो ऋण सहुलियत ब्याजदरमा लिन भने पाउँदैन । ब्याज बढी हुन्छ ।
स्तरोन्नतिका मापदण्ड– आयको मापदण्ड (जिएनआई पर क्यापिटा)
यो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति आय (जिएनआई पर क्यापिटा) १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुगेपछि स्तरोन्तति हुने थ्रेसहोल्ड हो ।
यसको दोब्बर अर्थात् २ हजार ४ सय ८४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेपछि मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ ।
नेपालको अवस्था – २०१५ को त्रिवर्षीय समीक्षा हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६ सय ५९ डलर थियो । २०१७ मा त्यो ८ सय ६२ डलर पुगेको छ ।
त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी सूचकमा साक्षरता दर र माध्यमिक तहमा इन्रोलमेन्टको दर तय गरिएको छ । यो सूचकमा ६६ % भन्दा माथि अंकलाई थ्रेसहोल्डका रूपमा लिइएको छ ।
नेपालको अवस्था – यो सूचकांकमा नेपाल २०१५ मै योग्य भइसकेको थियो । त्यसवेला यो सूचकांकमा नेपालको स्थिति ६८.७ थियो । अहिले त्यसभन्दा सुधार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए ।
यस सूचकांकमा अर्थतन्त्र कत्तिको जोखिममा छ भन्ने हेरिन्छ । यसमा जनसंख्या, अन्य अर्थतन्त्रसँग पहुँच, वस्तु निर्यातको केन्द्रीकरण, कृषि, वन तथा माछाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान, तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको संख्यालगायतलाई हेरिन्छ । यो सूचकमा ३२ भन्दा कम हुनुलाई थ्रेसहोल्ड मानिएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
नेपालको अवस्था – यो सूचकांकमा समेत नेपाल २०१५ मै योग्य भइसकेको थियो । त्यसवेला नेपालको इभिआई सूचकांक २६.८ थियो । अहिले यसमा समेत सुधार भएको छ ।